၃၀.၁၀.၂၀၂၀ – နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – Sports A2Z
– အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ယူရိုပါလိဂ်အိမ်ကွင်းနိုင်ပွဲအပြီးမှာ နည်းပြ အာတီတာက ပေပေဟာ ဦးစားပေးကစားသမားတစ်ဦး မဟုတ်ပေမယ့် တခြားကစားသမားတွေထက်တော့ သူ့ကို အခွင့်အရေး ပိုပေးထားကြောင်းနဲ့ သူ့အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ပြီး ဂိုးနားမှာ တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းသွား။
A real honour to make my debut tonight. Thank you to everyone for the messages! Journey is just beginning…🙏🏼 pic.twitter.com/OholEhPzA2
— Balogun (@fbalogun67) October 29, 2020
–	ဒန်ဒေါ့လ်ခ်နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာ အာဆင်နယ်အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဖိုလာရင် ဘာလိုဂွန်က စောင့်စားနေရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒီအတွက် အာတီတာနဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဆို။
–	နောက်ခံလူ ဝီလီယမ် ဆာလီဘာအနေနဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့အတူ မြောက်လန်ဒန်မှာ ပိုမိုအသားကျလာပြီလို့ ပြောကြားလိုက်ပြီး လာမယ့်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ရလာတော့မယ့် သဘောမျိုးကို အာတီတာပြောကြား။
–	အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ရက်ဒ်ဘူးလ် ဆာ့လ်ဇ်ဘတ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဒေါမနစ် ဆိုဘော့ဆ်လိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတာ မှန်ကန်ကြောင်း အီတလီဂျာနယ်လစ် ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနိုထုတ်ပြန်သွားပြီး ကင်းထောက်တွေ စေလွှတ်စောင့်ကြည့်ထားတယ်လို့ဆို။
–	ကွင်းလယ်လူ ဂျိုးဝီလော့ခ်ဟာ အချိန်ပေးစောင့်ကြည့်ဖို့ ထိုက်တန်သူဖြစ်ပြီး အာတီတာအနေနဲ့ သူ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း တစ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒန်းဒေါလ်ခ်နဲ့ ပွဲအပြီးမှာ မာတင် ကီးယွန်းသုံးသပ်။
–	သူ့ရဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ အမ်းမရိတ်နေ့ရက်တွေက ကုန်ဆုံးသွားနိုင်ကြောင်း ကွင်းလယ်လူ မက်တီယို ဂန်ဒူဇီက ခန့်မှန်းသွားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလည်း အငှားထွက်ကစားနေတဲ့ ဟာသာဘာလင်အသင်းနဲ့အတူ အခွင့်အရေးမရသေးဘဲ ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေရ။
–	ယူရိုပါလိဂ်မှာ နိုင်ပွဲပြန်ရအပြီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ရလဒ်ဆိုးတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုလည်း အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ အနိုင်ယူသွားဖို့ ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်း နည်းပြ အာတီတာပြောကြား။
–	အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ယူရိုပါလိဂျအိမျကှငျးနိုငျပှဲအပွီးမှာ နညျးပွ အာတီတာက ပပေဟော ဦးစားပေးကစားသမားတဈဦး မဟုတျပမေယျ့ တခွားကစားသမားတှထေကျတော့ သူ့ကို အခှငျ့အရေး ပိုပေးထားကွောငျးနဲ့ သူ့အနနေဲ့ မှနျကနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ခမြှတျပွီး ဂိုးနားမှာ တညျငွိမျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ပွသနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမှာဖွဈကွောငျး တိုကျတှနျးသှား။
–	ဒနျဒေါ့လျချနဲ့ ယူရိုပါလိဂျ အိမျကှငျးပှဲစဉျမှာ အာဆငျနယျအတှကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့တဲ့ လူငယျတိုကျစဈမှူး ဖိုလာရငျ ဘာလိုဂှနျက စောငျ့စားနရေတဲ့ အခှငျ့အရေးကို ရရှိခဲ့ပွီဖွဈပွီး ဒီအတှကျ အာတီတာနဲ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျတှကေို ကြေးဇူးတငျကွောငျးဆို။
–	နောကျခံလူ ဝီလီယမျ ဆာလီဘာအနနေဲ့ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့အတူ မွောကျလနျဒနျမှာ ပိုမိုအသားကလြာပွီလို့ ပွောကွားလိုကျပွီး လာမယျ့ပှဲတှမှော ပါဝငျခှငျ့ရလာတော့မယျ့ သဘောမြိုးကို အာတီတာပွောကွား။
–	အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ ရကျဒျဘူးလျ ဆာ့လျဇျဘတျအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျလူ ဒေါမနဈ ဆိုဘော့ဆျလိုငျးကို စိတျဝငျစားတာ မှနျကနျကွောငျး အီတလီဂြာနယျလဈ ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနိုထုတျပွနျသှားပွီး ကငျးထောကျတှေ စလှေတျစောငျ့ကွညျ့ထားတယျလို့ဆို။
–	ကှငျးလယျလူ ဂြိုးဝီလော့ချဟာ အခြိနျပေးစောငျ့ကွညျ့ဖို့ ထိုကျတနျသူဖွဈပွီး အာတီတာအနနေဲ့ သူ့ကို ဘယျအခြိနျမှာ ဘာလုပျရမယျဆိုတဲ့ မှနျကနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခမြှတျနိုငျအောငျ ကူညီပေးနိုငျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျကွောငျး တဈဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ဒနျးဒေါလျချနဲ့ ပှဲအပွီးမှာ မာတငျ ကီးယှနျးသုံးသပျ။
–	သူ့ရဲ့ အာဆငျနယျနဲ့ အမျးမရိတျနရေ့ကျတှကေ ကုနျဆုံးသှားနိုငျကွောငျး ကှငျးလယျလူ မကျတီယို ဂနျဒူဇီက ခနျ့မှနျးသှားခဲ့ပွီး လကျရှိမှာလညျး အငှားထှကျကစားနတေဲ့ ဟာသာဘာလငျအသငျးနဲ့အတူ အခှငျ့အရေးမရသေးဘဲ ပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့ စောငျ့ဆိုငျးနရေ။
–	ယူရိုပါလိဂျမှာ နိုငျပှဲပွနျရအပွီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ရလဒျဆိုးတှကေို ရပျတနျ့ဖို့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကိုလညျး အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ အနိုငျယူသှားဖို့ ကွိုးစားသှားမှာဖွဈကွောငျး နညျးပွ အာတီတာပွောကွား။
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ – နောကျဆုံးရ ခယျြလျဆီးသတငျးမြား စုစညျးမှု